Yiziphi imithetho PCB isakhiwo esimweni? - China Fastpcba Technology
usekelo lwe-imeyili pcba19@pcb-smt.net
Call Ukusekela 0755-26978877
Yiziphi imithetho PCB isakhiwo esimweni?
PCB ibhodi wiring ingenye yezinto ezibalulekile ayikwazi ukusebenza. Izintambo zikagesi ezisobala PCB kusekelwe schematics kagesi kanye etafuleni wire kanye okudingekayo wire ububanzi isakhiwo isikhala ephrintiwe wire, izintambo kufanele ngokuvamile ulandele lemiyalelo:
1. On the kwesisekelo wanelise izidingo ukusetshenziswa, oda lokukhetha indlela wiring kuyinto isendlalelo esisodwa → ungqimba wokuqala → multilayer, ukuthi, wiring kungenziwa lula.
2. Isignali phezu ungqimba efanayo ibhodi PCB ishintsha indlela nge kummango noma inguquko bushelelezi, futhi lo engaba ugobile kancane kangcono, ukugwema kagesi emkhakheni okuhlushwa, isiginali ukucabangisisa impedance ezengeziwe.
3. isakhiwo wiring phakathi pads amabili uxhumano njengoba short ngangokunokwenzeka, futhi amasignali olubucayi futhi amasignali ezincane uhambe kuqala. Ukuze wehlise ukubambezeleka nokugxambukela signal encane. Isihlangu isisekelo umugqa kufanele wabeka eceleni umugqa okokufaka kwe-circuit analog; layout ungqimba umqhubi efanayo kufanele ngokulinganayo basakaza. Le ndawo conductive ku wire ngamunye kufanele kuqhathaniswa ukulinganisela ukuvimbela ibhodi warpage.
4. izifunda Digital nelezifunda analog kumele sihlukaniswe e wiring ukuze singathwesi ukugxambukela nomunye.
5. Lapho izingxenye wesifunda ebhodini PCBA kuthiwa nisekeliwe exhunywe kwi-amandla supply, iminonjana kufanele kube kube kufushane ngokusemandleni futhi eduze ngangokunokwenzeka ukuze unciphise ukumelana yangaphakathi ebhodini PCB.
6. Budze I / O imigqa ephezulu ijubane izifunda, ezifana amaningi-I / O imigqa umehluko yokukhulisa umsindo yokukhulisa umsindo olinganiselayo, ukuba alingane. Ukuze ugweme ukubambezeleka ezingadingekile noma isigaba shift.
7. iminonjana kusendlalelo ebhodini multilayer ngamunye kufanele perpendicular nomunye ukunciphisa elihlangana. Gwema umgwaqo kanye ibhalansi zezendlalelo yasenhla nemithombo yasenzansi.
8. Lapho pad ehlangene endaweni conductive endaweni ezinkulu kanye nezincane, kufanele luphahlekwa wire elincanyana nge ubude hhayi ngaphansi kuka 0.5mm. Ububanzi wire elincanyana akufanele kube ngaphansi kuka-0.13mm.
9. wire esiseduzane emaphethelweni ephrintiwe wesifunda ibhodi kufanele ibe ngaphezu 5mm kusukwa onyathelisiwe wesifunda ibhodi. I wire phansi Ungasondelana emaphethelweni ebhodini lapho kudingeka. Uma wesitimela mhlahlandlela okuzofakwa phakathi ukucutshungulwa isiliphu wesifunda ibhodi, ibanga phakathi wire futhi ibhodi kumele okungenani ibe nkulu kunaleyo we wesitimela Umhlahlandlela ukujula.
FASTPCBA Technology Co., Ltd is a professional PCB nomkhiqizi eChina, Shenzhen. Nge engu-14 yentuthuko, FASPCBA liphenduka umakhi unqambothi HDI PCB, ne ukukhiqizwa ikhono 35,000 meters.If square ufuna ukufunda okwengeziwe PCB , sicela uthintane: pcba06@pcb-smt.net
isikhathi Iposi: Aug-27-2018